यो कस्तो प्रेम ? एक अर्कालाइ नदेखी बिबाह गरे, केटि आफै भागेर केटाको घर आइन, एक अर्कामा यस्तो माया (भिडियो सहित):: Mero Desh
यो कस्तो प्रेम ? एक अर्कालाइ नदेखी बिबाह गरे, केटि आफै भागेर केटाको घर आइन, एक अर्कामा यस्तो माया (भिडियो सहित)
Published on: ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:२२
‘मोरंग । प्रेम वास्तवमा पारस्परिक खुसी र स्नेहको एक विस्तृत रुप हो । अन्यप्रति गरिने स्नेह नै प्रेम हो । प्रेम सागरजस्तो हुन्छ । अझ भनौँ, यसको गहिराइ नाप्न सकि न्न, अझ होइन प्रेम आकाशजस्तो हुन्छ, जसको विशाल फैलावट नाप्न सकिँदैन । प्रेम आ’त्माको स्वभाव हो ।
‘प्रेम हरकोहीको नैसर्गिक अधिकार हो र सबैले बुझ्नैपर्ने महत्वपूर्ण कुरा प्रेम सेवा हो, यसले केवल सेवाभाव राख्द छ ।त्यसैले प्रेममा झर्को हुँदैन । छु’ट्टी हुँदैन । प्रेमलाई छो ड्नै सकिँदैन ।प्रेम प्राकृतिक हुन्छ, प्राकृतिक रुपमा चलिर हन्छ ।
‘सूर्यले कहिल्यै पनि विश्रान्ति नलिएजस्तै, हावाले जहिल्यै वहेजस्तै, पृथ्वीले आफ्नो अक्षांशमा परिक्रमा गरिरहेजस्तै नरोकिई निरन्तर चलिरहन्छ प्रेम । यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो, बगिररहन्छ ।
‘यस्तै मोरंगमा एक जोडीको प्रेम देख्न सकिन्छ। फोनमा बोलेको भरमा उनीहरुले अहिले बिबाह गरेका छन । बिबाह आगाडी कहिलै पनि भेट भएको थिएन भन्दै अन्तर्वार्तामा यस्तो माया देखाएका छन ।
यो पनि,,ओझेलमा परेकी गायिकाको आवाज सार्बजनिक भयो ! हिमाल हासेको। … (भिडियो सहित)
‘पाल्पा जिल्लामा जन्मेकी ओझेलमा परेकी गायिका मिना श्रेष्ठ को आवाज सुन्दा पक्कै पनि कोइली को स्वर पनि फिका न पर्ला भन्न सकिदैन । संघर्ष पिडा को जीवन बिता ई रहेकी गायिका आफ्नो बितेका समय उल्लेख गराउदै गित बाटै धेरै जानकारी गराउनु भएको छ ।
‘सहायक कलाकार: देबु राम राई ( देव ), सन्जिब शिंग कार्की, अस्मिता पराजुली, रेनुका राई नर्तक: यमुना सुनु वार, श्रेय गुरुङ, बिबेक राई, होम कुमारी, सबिन भुजेल, चण्डिका राई MUA: बिनिता राई छायांकन: मनसुन राई र